Mifandraisa amin'ny Company Company ao Dubai Miandry ny Expats 🥇
Araho ato amin'ny media sosialy | Dubai City Company
Ny Dubai City Company dia manome ny Guide du monde du Dubai sy ny tantara mahaliana. Orinasa mpamorona manana hevitra marobe izahay miaraka amin'ny fampiroboroboana ny media sosialy amin'ny serasera. Mino ny herin'ny fahaiza-misaina ara-tsosialy isika mba hampidina ny lanjan'ny fandraharahana any Afovoany Atsinanana.
Orinasa ao afovoany - Behance
Tsy voafehina: Fikarohazana & Visa asa
Hiverina eny an-toerana, tsy misy fanontaniana apetraka.
Raha izany no tsy mahazo asa amin'ny Andro 60? Afaka mandefa ny fangatahana refund ianao:
refund@dubaicitycompany.com Ity dingana ity dia mandray ny andro fandraharahana 3-7 mba hamitana, ary hiverenina indray amin'ny famatsiam-bola ny vola.
Manohy ny fanekena
Alefaso ny CV: Orinasa Dubai City
Ankehitriny: Azonao atao ny mampiditra CV amin'ny maimaimpoana amin'ny orinasanay
Raha tsy manana vola ianao? Azonao atao ny mandefa ny CV efa nohavaozinao amin'ny ekipanay:
resume@dubaicitycompany.com Ny ekipanay dia hanana ny hijery ny antsipirihany. Handefa hafatra momba anao ihany koa izahay.
Manao fangatahana fampahalalana
Ankehitriny: Mifandraisa amin'ny ekipanay
Raha sendra te hahazo fanazavana misimisy ianao Azonao atao ny mandefa fangatahana fampahalalana amin'ny ekipanay:
office@dubaicitycompany.com Ny ekipanay dia hijery ny fangatahanao ary hiverina aminao ao anatin'ny 3 andro.
London City, Grande-Bretagne
Dubai City, Emirà Arabo Mitambatra
Politika Fitantanam-pitondrana - DMCA
Politika Fiarovana fiainan'olona - Policy
Terms and Condition - Terms
Company Name: Dubai City Company
Company number 09578474
Mifandraisa aminay - Miandry anao ny orinasa Dubai City!
Mangataha fanampiana bebe kokoa. Noho ny Dubai City Ekipa mpandraharaha mpanjifa. Mazava ho azy fa miandry ny fanehoan-kevitrao. Raha te hifandray ianao. Iray amin'ireo solontenan'ny mpiasa. Azafady ampiasao ny mailaka ao amin'ny orinasa any Emirà Arabo Mitambatra. Ny orinasanay dia mankasitraka mandrakariva ireo mitady asa. Ho an'ny fanontaniana maro sy ny fanontaniana any Dubai, ampahafantaro anay. Indrindra raha mitady asa any Moyen Orient. Amin'ny lafiny iray, mandray foana ny mpampiasa vaovao isika Alefaso ny resadresaka vaovao. Tanjonay ny ho fitadiavana asa fitadiavana asa fitadiavam-baovao ao Dubai.
Dubai City Company manampy orinasa mpikaroka hitady mpiasa. Miara-miasa amin'ireo mpikaroka rehetra mitady asa izahay. Ny asantsika dia ny mamantatra vahaolana amin'ny asa. Ho an'ny vahiny any UAE. Ankoatra izay, ny tanjonay dia ny hifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa miaraka aminay. Na mijery ianao mba hahita asa fitantanana. Na ny toerana fivarotana be mpividy na na dia bola sy ny asa fitantanam-bola. Teknika sy asa momba ny lalàna. Ary koa ny fahafaha-manao amin'ny olombelona. Dubai City Company dia afaka manampy anao. Amin'ny dingana rehetra.
Miresaha mandrakariva amin'ny manam-pahaizana momba ny recruitment ao Dubai!
Raha ny zava-misy dia omenay tanana mandritra ny fotoana maharitra isika. Na dia mety ho marina izany. Saingy mihoatra ny asa 1Million mitady mpitsidika. Nampiasa anay ny orinasam-pifandraisana nitady asa tany Dubai. Noho izany antony izany dia mandefa ny fitadiavana asa isika torolàlana ho an'ny expats ao Dubai. Tsy maninona na avy aiza ianao. Zahao ny masontsika Dubai Blog ho an'ny mpitsoa-ponenana. Ary vokatr'izany, mahita ny nofinofinao ao Dubai miaraka amin'ny orinasam-pikarohantsika. Mandritra ireo toe-javatra ireo, dia manenjika torolalana amin'ny antsipiriany isika. Ohatra, azonao atao amporisiho ny CV ho an'ny mpandraharaha any Dubai. Ary fantaro ny fomba mifandraisa amin'ireo orinasa any Gulf. Izay rehetra hampiakatra ny tombontsoa azonao hatao ho an'ny UAE.
Mifandraisa aminay ny orinasan'ny tanànan'i Dubai